News - 15 afọ ncheta nke Taizhou Lujury Technology Co., Ltd.
15th ncheta nke Taizhou Lujury Technology Co., Ltd.
Wu Yunfu, onye isi oche nke Taizhou Lujury Technology Co., Ltd., na Zhang Juqin, onye isi njikwa ụlọ ọrụ, zukọtara na ndị nnọchi anya karịa ndị na-eweta 30 ma nwee mmekọrịta enyi na omimi.
Mkpọkọta nke ogbako ahụ apụtaghị na Lujury Technology ga-anabata ọhụụ ọhụụ site na iji ọhụụ ọhụrụ, kamakwa ọ pụtara na LujuryTechnology ga-etinyekwu uche na njikwa nke ọkọnọ ngwongwo yana ogo nke imekọ ihe ọnụ na ndị na-eweta ngwaahịa.
Na nzukọ ahụ, Onye isi oche Wu Yunfu kwuru okwu ma kwuo isi okwu. O gosipụtara ekele ya nye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eweta ngwaahịa maka ezi nkwado ha na nkwado ogologo oge.
Dabere na nyocha miri emi banyere ọnọdụ ụlọ ọrụ ugbu a, ọ tụpụtara ebumnuche na echiche maka mmepe atumatu n'ọdịnihu, kwado echiche ọhụrụ iji dozie nsogbu, ma gbalịa inweta ọkwa dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ. N'otu oge ahụ, ọ na-ebute ụfọdụ atụmanya na ihe achọrọ maka nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ.
Nke mbụ, kwado ka gị na mmadụ na-ekwurịta okwu nke ọma, echekwala na ọ ga-esiri gị ike;
Nke abuo, iguzosi ike n'ezi ihe, mgbe a bịara n'ime, ọ bụghị ichefu obi mbụ, dị ka mgbe niile;
Nke ato, ndị mmekọ nke ndị mmekọ nwere ike nweta izu oke na ngalaba ọrụ ha;
Nke anọ, ụkpụrụ omume, imekọ ihe ọnụ site n'ezi obi, na-achọ ihe jikọrọ ọnụ mgbe a na-edozi esemokwu, ma na-ebute nsogbu ozugbo, na -adị mfe idozi ya n'oge.
Zhang Juqin, onye isi njikwa LujuryTechnology, kwuru n'okwu ya na ya nwere nnukwu ekele maka ndị na-ebubata ya maka onyinye ha na mbọ ha na ngwaahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ụlọ ọrụ ahụ anaghị ekewapụ n'akụkụ ndị na-eweta ngwaahịa, akụkụ ọ bụla bụ nkwa nke ngwaahịa.
Oriakụ Zhang kwusiri ike na n’ọdịnihu, ọ ga-eme ka njikwa nke usoro ihe oriri sikwuo ike, ma nyekwa echiche nchịkwa dị iche iche dị elu maka ndị na-ebubata ya. Akụkụ abụọ a ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite arụmọrụ arụmọrụ nke otu abụọ ahụ, belata ụgwọ ọrụ yana mepụta azụmaahịa ka ukwuu. uru. O kwenyesiri ike na ka ụlọ ọrụ ahụ na-eto eto, imekọ ihe ọnụ n'etiti akụkụ abụọ ahụ ga-adị nso na ọnụ iji ghọrọ mkpụrụ nke ihe ịga nke ọma.
Na oge ọhụrụ, Taizhou Lujury Technology Co., Ltd Association ga-arụsi ọrụ ike ịza iwu mba ma na-agbaso oge iji nye aka na mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala eletriki igwe eletrik ọhụrụ nke China, na-agbasi mbọ ike na njigide ogo ahụ.